Semt wuxuu qeexayaa siyaabaha loo ilaaliyo Website-ka WordPress-ka Hackers
Internetku wuxuu bixiyaa khayraad badan oo dad badan. Ganacsiyo badani waxay qabtaan internetkamareegta si ay u soo jiito macaamiisha meelo kala duwan oo ka baxsan webka. Qaar ka mid ah meelahaas waxaa ka mid ah mashiinka raadinta adoo isticmaalaya Search EngineHagaajinta (SEO) ama shabakadaha bulshada iyadoo la adeegsanayo Suuqa Warbaahinta Bulshada (SMM).
WordPress ayaa ku xisaabtamaya ku dhowaad 24% dhammaan bogagga internetka ee dunida. Waxaywaxay leeyihiin barxad bilaash ah oo internetka ah oo qof kastaa isticmaali karo oo faa'iidi karo. Kaalintooda, Dhismaha dhismaha DIY iyo waxyaabo kale oo internetka ku yaala koodhkoodawaxay siiyaan goob furan oo loogu talagalay dad badan oo ganacsadaha iyo bloggers si ay u dejiyaan goobahooda e-commerce. Si kastaba ha ahaatee, khaniisiinta ayaa isku soo galaya goobahaashab. Waxaa jira in ka badan 94563 hack isku daygooda ku dhufo sitayaasha WordPress daqiiqad kasta. Tiradani waxay timaaddaa sababtoo ah boorashkooda furan oo soo bandhigayadhammaan qaababka. Natiijo ahaan, WordPress ayaa soo bandhigi kara jawi nabadgelyo ah oo ay ugu badantahay in ay isticmaalaan si ay u fuliyaan qaar ka mid ah kuwa badan oo halis ahweerarrada.
Andrew Dyhan, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,waxay eegaysaa talooyinka aad u baahan tahay si aad u ilaaliso boggaaga WordPress ka soo weerarta weerarka.
Isticmaalka ereyada sirta ah ayaa muhiim ah..Kacaanka ugu horreeya ee hackerka ah ayaa badanaa isku dayayasirta daciifka ah ka hor inta aanad bilaabin ficilo xoog leh. Furaha sirta ah sida 12345 ma aha erey amar ah. Xaaladaha kale, ha isticmaalin maamulsirta oo ah magaca ilmahaaga ama shirkadda. Waxaad ka tagi kartaa macluumaad badan oo shirkadda u nugul, taasina waxay ka dhigan kartaa internetka oo dhannabadgelyo ku jira xaalad halis ah. Intaa waxa dheer, dareenka macaamiishaada muhiimadda tallaabooyinkan.
Dib u cusbooneysii khariidadaha iyo qalabka casriga
Ilaalinta kumbiyuutarkaaga ilaa taariikhda waxay kaa badbaadin kartaa qaar ka mid ah weerarrada websaydhka cusub. InKiisaska intooda badan, hackers waxay isticmaalaan isticmaalka xiriiro waxyeello leh kuwaas oo ku dhexdhigaya qoraallada webka. Tusaale ahaan, koodhiyeyaashu waxay isticmaali karaan qorista bogga. TaniIsticmaalidda weerarrada server-yada webka iyada oo la adeegsanayo amarrada guud ee foomamka saxiixa ama meelaha kale ee qoraallada qoraalka ah. Natiijo ahaan, waa muhiimtixgeliyaan qaar ka mid ah xarigga macluumaadka sida xogta u socoto iyo ka soo-saarka ee bogga shabakada internetka. Cabbir kale ayaa isticmaali kara bakhaarada ka horjeeda. Kuwani waasoftware kaas oo lagu ogaan karo fayruusyada iyo nacasnimo sida Trojans. Websaydhku wuxuu joogi karaa ammaan.
Hab kasta oo eCommerce ah, waxaa jira habab badan oo loo adeegsado serverkaInternetku wuxuu ku shaqeeyaa habka isdhaafsiga, halkaas oo uu qofku u diro oo uu ka helo amarrada kaararka. Sidoo kale, khabiirrada ayaa isticmaala fursaddan si ay u sameeyaanwebsite-yadooda waxay u diraan oo ay helaan amarrada helitaanka si sharci-darro ah. Marka aan samayno website-yo, isticmaalaha iyo macaamilka macmiilku waainta badan hadafkayaga ugu dambeyn. Waxaan ku fashilmeynaa inaan tixgelinno suurta galnimada khabiirada iyo dadka kale ee leh ujeedooyin xanuunsan. Qaar ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee hacker ahwaxay isticmaali karaan si ay u galaan xog-ururin ay ka mid yihiin SQL Injection. Ammaanka websayd kasta wuxuu ku xiran yahay hababka la heli karo oo xakamayn kara xatooyada Source .Si kastaba ha noqotee, waxaa jira farsamooyin kale oo badan oo dadku u shaqaaleeyaan si ay u helaan boggooda internetka si ay uga badbaadaan khiyaamada